​शिक्षामा सरकारको भिजन भएन-उमेश श्रेष्ठ, सांसद तथा शिक्षाविद्
Tuesday, 27 Jun, 2017 12:00 PM
एसईइपछि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा के फरक भयो ?
अहिले बिद्यालय १२ कक्षासम्म भएको छ । पहिला फेल र पास भन्ने हुन्थ्यो । अहिले ग्रेडिङ सिष्टम छ । बिश्वभरी चलेको ग्रेडिङ सिष्टम नेपालमा पनि सुरु भएको छ ।
ग्रेडिङमा अगाडि रहेकाहरुले साइन्स÷मेनेजमेन्ट पढ्न पाउछन् । त्यस्तै कम ल्याउनेले टेक्निकल र भोकेसनल अध्ययन गर्न पाउछन् । हुन त अझै मान्छेहरुले राम्रँेसँग ग्रेडिङ सिष्टम बुझिसकेका छैनन् । बिस्तारै यो कार्यान्वायनमा जाने छ ।
सुधार गर्नेपर्छ के छन् ?
हामीले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन्
अहिले हामी साधरण शिक्षा मात्र पढाउछौं, व्यवसायीक रोजगारमुलुक शिक्षा प्रणालीमा जानुपर्छ । अस्थिर सरकार भएकाले शिक्षामा दीर्घकालिन योजना र नीति बन्न सकेको छैन । जसकारण शिक्षामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । अब आउने सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ र दीर्घकालिन सोचका साथ काम गर्नुपर्छ ।
एसइईपछि अहिले बिद्यार्थीका रोजाई फेरिएका हुन् ?
खासै फेरिएका छैनन् । धेरै बिद्यार्थीमा लहैलहैमा लागेर पढ्ने प्रवृत्ती छन् । धेरै बिद्यार्थीहरु मानविकि र शिक्षा विषय नै रोज्छन् । प्राविधिक र भोकेसनल शिक्षामा धेरैको ध्यान गएको छैन । अर्काेतर्फ सरकारले पनि यसमा चासो दिएको छैन । प्राविधिक र भोकेसनल शिक्षा महंगो पनि छ । सरकारी स्कुलहरुमा शिक्षाको गुणस्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । यसमा सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
म हिसानको अध्यक्ष भएको बेलादेखि नै निजी कलेजहरुमा ३ प्रतिशत छात्रवृत्तिको कोटा छुट्याएका छौं । बिद्यार्थीहरुले महंगा कलेज नै छान्नुपर्छ भन्ने छैन । महंगा भन्दा राम्रा कलेज छान्नुपर्छ ।
लिटल एन्जल्स कलेज कसरी सफल भयो ?
सबैभन्दा ठुलो कुरा काम होइन । काम देखाएर सफल हुने हो । ठुलो सोच र भिजन ल्उिर मैले लिटल एन्जल्स कलेज सुरु गरेको थियो । शिक्षामा सफलता प्राप्त गर्नु परेको ज्ञान राम्रँे दिएर नजिता राम्रँे ल्याएर नै हो ।
यो भिजनदेखि व्यवस्थापनसम्मका कुराहरु हुन्छन् । हामीले क्षणिक लाभ भन्दा पनि दीर्घकालिन सोच राख्यौं । कडा मेहनत ग¥यौं । त्यसहीकारण बिद्यार्थी र अभिभावकले बिश्वास गर्नुभयो ।
हाम्रो योजना भनेको बिश्वबिद्यालय बनाउने नै हो । त्यसका लागि चार वर्षअघि नै हामीले निवेदन दिइसकको छौं । कमिटि पनि गठन भएको छ । सायद छिट्टै अनुमती पाउने छौं ।
अब स्थानीय सरकारले शिक्षामा कस्तो योजना अघि बढाउनुपर्ला ?
स्थानीय सरकारले शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो । शिक्षाको विषउमा प्रष्ट खाका बनाएर लगानी गनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा बिनियोजना हुनुपर्छ । सरकारको शिक्षामा भिजन छैन, देश बिकासका लागि पहिला शिक्षा क्षेत्रमा भिजन बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।